Uhlu Lwezingcingo Zebhizinisi LaseSingapore | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi laseSingapore
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwezingcingo lwebhizinisi laseSingapore
Izinombolo Zocingo Zebhizinisi laseSingapore
Uhlu lwezinombolo zebhizinisi laseSingapore lungeze uhlu lwezinombolo zefoni oluvumelekile futhi olubuyekeziwe. Ngenkathi ungacabanga ukusebenzisana nohlu lwezingcingo lweSystem Business Business nokuzigcina kudathabheyili konke okudingekayo ukuqalisa umkhankaso wokushaya amakhaza, akunjalo. Le datha yezinombolo zeselula iqoqwa ngokuqondile kubantu abakhombise ukuthakazelela ukuthola imikhankaso yokuthengisa / yokukhangisa kuphela.
Target amaklayenti akho ngemininingwane yethu esezingeni eliphezulu ye-Tele-Call / Bulk SMS / ukumaketha kwe-imeyili. Imininingwane yethu yedatha eneselula ingasetshenziselwa ukukhangisa, ama-sms amaningi, ukukhomba indawo ethile yabantu, umkhankaso wokhetho, njll. Sasesesha iwebhusayithi futhi sahlanganisa uhlu lwezinto zokuqala zenombolo yeselula kanye nenethiwekhi eyabelwe.
Thenga iSystem B2B Izinombolo Zenombolo
Inani Lamarekhodi: 3750
SINGAPORE IBHIZINISI LAMAHHALA WOKUXHUMANA
Database Yemibhalo Yamuva Le datha inemininingwane efanele futhi eqondile yokuxhumana namakhasimende ngezindlela zokubiza okubandayo, ukuthumela izingcingo, ukumaketha kwe-sms kanye nokuxhumana ngqo nabazitholile.
Ukuthenga uhlu lwezinombolo zocingo lwebhizinisi laseSingapore noma uhlu lwezinombolo zeselula, kuyindlela ewusizo kakhulu yebhizinisi, noma ngabe uhlela ama-aphoyintimenti, ukuthengisa ngokuthe ngqo ngocingo noma amanye amasu indlela yebhizinisi elinamakhasimende okuqondisa okulungile ngamandla wokuthumela izingcingo.
Uhlu lwefoni yasebhizinisi laseSingapore oluvela Database Lwamakheli Omusha eliqukethe ama-3,750 aqoqwe idatha efakiwe yohlu lwezinombolo zebhizinisi olufika ku- $ 1,000, kungukukhokha kwesinye isikhathi kanye ne-software esheshayo engalandelwa engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV futhi ingasakazwe kalula ideskithophu yakho.
Database Lokugcina Lokuposa ngumthombo wezinombolo zebhizinisi lebhizinisi elihola phambili, kuqinisekisa ukuthi uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Singapore luvuselelwa, lunikeza uhlu lwefoni lwebhizinisi olunembile nolucacisiwe mayelana namakhasimende wamanani ngentengo enengqondo yezinhlu zefoni zebhizinisi kodwa linganikeza inani eliphakeme imininingwane esezingeni eliphezulu yokuthuthukisa ukuthengisa kwakho engasebenzisa ibhizinisi lakho futhi kungasiza ukuthuthukisa ibhizinisi lakho
Umbuzo webhizinisi laseSingapore & Impendulo